DHAGEYSO:Gudiga doorashooyinka oo dalbaday in deg deg loo soo xulo ergooyinka doorashada | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Gudiga doorashooyinka oo dalbaday in deg deg loo soo xulo ergooyinka doorashada
DHAGEYSO:Gudiga doorashooyinka oo dalbaday in deg deg loo soo xulo ergooyinka doorashada
Guddiga hirgelinta doorashada Maamulka Galmudug ayaa Maanta shaaciyay shanta kursi ee ugu horreeysa ee doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka ee lagu qabanayo deegaanada Maamulkaas.
Guddiga ayaa Qoraal uu soo saaray ku sheegay inay guda galayaan diiwaan-gelinta Odayaasha dhaqanka, Bulshada Rayidka iyo Ergada dooraneysa shanta kursi ee ugu horreeysa ee Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya.
Sidoo kale Guddiga hirgelinta doorashada Galmudug ayaa xusay in maalmaha soo socda ay qaban doonaan doorashada kuraasta tirsigoodu kala yihiin HOP043 oo hada uu ku fadhiyay Xildhibaan Xuseen Qaasim Yuusuf, HOP054 oo ku fadhiyay Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire, HOP104 oo ku fadhiyey Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad, HOP067 oo ku fadhiyey xildhibaan Cabdullaahi Cali Axmed iyo HOP026 oo ay ku fadhido Xildhibaan Ikraan Aadan Absuge.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa xalay sheegay in doorashada shanta kursi ee ugu horreeysa Golaha Shacabka ay ku qaban doonaan saddex maalmood guhadood.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhoweeyay doorashada kuraastii u horreysa Golaha Shacabka ee uu ku dhawaaqay Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor in saddex maalmood gudahood lagu qabanayo.
Dhanka kale Afhayeenka Gudiga Doorashooyinka Heer Federaal ee Soomaaliya Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka Heer maamul Goboleed ay u soo gudbiyeen liiska Shan kursi oo doorashadooda ay ku qabanayaan Magaalooyinka Dhuusamareeb & Gaalkacyo ee Maamulka Galmudug.
Afhayeenka oo Shir jaraa’id Warbaahinta ugu qabtay Magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay inay u diyaar garooban Beelaha leh iyo Dhaqankooda soo Xulista Ergooyinka Kuraastaasta Golaha Shacabka.
Waxaa uu uga mahad celiyay Maamulka Galmudug oo noqonaya Maamulkii ugu horreeyay ee qabanaya doorashada Golaha Shacabka, wuxuuna rajo ka muujiyay in dhawaan la qabto doorashada Shantaas kursi ee Golaha Shacabka.
Maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in Galmudug lagu qabto doorashada Shanta Kursi ee Golaha Shacbaka, waxaana tallaabadaasi ay ka dambeysay kadib safar uu Ra’iisul Wasaare Rooble uu ku tago Magaalada Dhuusamareeb oo madaxweynaha Galmudug ku balan qaaday inuu sadex Cishe gudahood doorashada ku qabanayo.
Next articleMaxkamadda oo agaasimaha dambi baarista ku xukuntay 4 bilood oo xabsi ah